Radanoara Julien : “Be ny azo hetsehina itakiana ireo Nosy malagasy” | NewsMada
Radanoara Julien : “Be ny azo hetsehina itakiana ireo Nosy malagasy”
Par Taratra sur 01/07/2020
“Efa manohana an’i Madagasikara izany izao ny Sadc, fa tsy ny Sadc ihany ny vondrom-paritra misy an’i Madagasikara. Misy ny Comesa, ny COI, ny Indian Ocean Rim Asssociation (Iora)… Firenena be dia be no ao anatin’izany.” hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien. Tokony hanao ambasadaoro mandehandeha amin’izay i Madagasikara, mijery an’ireo firenena tsy mankato loatra an’ny Frantsay: i Iran, ohatra, mpikamban’ny Iora, i Brezila, i Torkia… Tokony halehan’ny ambasadaoro ireo, miampy an’i Chine sy i Rosia.
“Tokony hahetsika avokoa izany mba hampahafantarina amin’izao tontolo izao koa fa tsy mipetra-potsiny amin’izao isika”, hoy izy.
Tsy mipetra-potsiny ny Frantsay
Efa notenenina teny amin’ny CCI Ivato, novambra 2019, ny tokony hanaovan’i Madagasikara diplaomasia miafina na an-dalantsara. Tokony ho efa natomboka izany. Satria tsy mipetra-potsiny i Frantsa. Tamin’iray volana, ohatra: namoaka ny fanekeny ny fanitaran’ny Frantsay ny fari-dranomasiny ny ONU. Nefa aty amin’ny faritry ny Ranomasimbe Indianina sy ny lakandranon’i Mozambika, efa 2 500 Km2 ny faritra ara-toekarena frantsay.
Hafatra ngezabe ho an’i Madagasikara sy ho an’izao tontolo izao izany: tsy raharahan’ny Frantsay ny ataon’ny tena, fa ataony ihany ny ataony. Jereo ny famitahan’ny Frantsay an’i Madagasikara, tokony ho tany Frantsa ny fivoriana manaraka ny amin’ireo Nosy malagasy. Vao mainka aza izy manararaotra ny fisian’ny Conoravirus sy ny fahasahiranan’izao tontolo izao. Odian’ny Frantsay hadinodino ilay fivoriana… miandry ny Malagasy.
“Ny tokony hataon’i Madagasikara, ahodina izay politika frantsay izay satria efa fantatra ny lohany”, hoy ihany izy.